Siyakwamukela ku-302 Pebble Beach! Vuka uvuke ekuphumeni kwelanga okuhle kakhulu kanye nokubukwa kolwandle ngenkathi uthatha umoya omusha wasolwandle onosawoti kuleli fulethi eliwubukhazikhazi nelesimanje lamaholide. Ifulethi linikeza ukubukwa okuhle kwendawo yokubhukuda yomndeni kanye nengadi enkulu kanye nenkundla yokudlala ngaphakathi kwePebble Beach. I-Pebble Beach inamachibi ama-3, i-slide, izindawo ezi-2 ze-braai, inkundla yokudlala kanye nokubeka okuluhlaza! Itholakala endaweni yokuqala nentsha yaseSibaya, imizuzu emi-5 ukusuka endaweni edumile yaseMhlanga naseMdloti. Ukuziphekela Ngokugcwele, WiFi, Netflix
Ukuziphekela Ngokugcwele - Iziphelelisi ezamukelwayo kuphela ezinikeziwe.
Ifulethi linamakamelo okulala ama-2, amagumbi okugeza angu-2, ikhishi eligcwele kanye nendawo yokuhlala evulekile. I-balcony enhle emboziwe enokubuka okumangalisayo kwezingadi, ihlathi lase-Hawaan, izilwane zasendle zasendaweni (okuhlanganisa i-Warthog & Small Buck), nokubukwa kolwandle.
2 izindawo zokupaka, nezivakashi ezipaka ngaphandle kwebhilidi.
Ukufinyelela Ebhishi: imizuzu eyi-12-14 uhamba ngezinyawo ngendlela yemvelo ukuya ebhishi lase-umdloti. Kuvulwa ngo-6am-6pm.
Itholakala oGwini oluseNyakatho yeKwaZulu-Natal, phakathi kwezifula Ohlanga kanye noMdloti, iSibaya Coastal Precinct inamahektha acishe abe ngu-1 000 endaweni emangalisayo egudle ugu kanye nehlathi elivikelekile.
Yonke le ndawo ithuthukiswa ibe indawo ehlala njalo yesikhathi esizayo! ISibaya kuthiwa izoba yindawo ethandwa kakhulu eThekwini.
ISibaya ixhumeke kahle kakhulu emazweni angaphandle, futhi iseduze nothelawayeka u-N2 no-M4. Lokhu kwenza iPrecinct ifinyeleleke eThekwini (23km), uMhlanga (4km) kanye neKing Shaka International Airport (7km).
Ngizokunika isikhala sakho kodwa ngikhona uma ungidinga